Nnukwu Mmiri Ozuzo Zoro na Naịjirịa | Akụkọ Ndị Dị na JW.ORG
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba
ỌGỌST 4, 2017
Nnukwu Mmiri Ozuzo Zoro na Naịjirịa
Malite n’abalị 6 ruo abalị 12 nke ọnwa Julaị, afọ 2017, nnukwu mmiri zoro n’ebe ọdịda anyanwụ Naịjirịa. Nnukwu mmiri ozuzo a mere ka e nwee idei mmiri na steeti atọ dị na Naịjirịa. Ha bụ Legọs, Naịja na Oyo. Ndị nta akụkọ kwuru na njinji ahụ jirinụ tara, ọ dịkarịa ala, isi mmadụ iri na asatọ.
Alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova nke dị na Naịjirịa kwuru na e nweghị Onyeàmà Jehova ọ bụla merụrụ ahụ́ ma ọ bụ nwụọ ná njinji a. Ma, e nwere mmadụ anọ n’ime ha idei mmiri ahụ mere ka ha gbapụ ebe ha bi. E nwekwara Ndịàmà Jehova abụọ ụlọ ha mebitụrụ, nweekwa otu onye ụlọ ya mebiri kpamkpam. Ndịàmà Jehova nọ na Naịjirịa na-agbatara ụmụnna ha ọdachi a dakwasịrị na ndị agbata obi ha na-abụghị Ndịàmà Jehova ọsọ enyemaka. Ọtụtụ n’ime ndị agbata obi ha ndị a bụ ndị idei mmiri ahụ mebisịrị ụlọ ha ma ọ bụ mee ka ha gbapụ n’ụlọ ha.
Nigeria: Paul Andrew, +234-7080-662-020
AKỤKỌ NDỊ SI N'OBODO DỊ ICHE ICHE